စီးပွါးရေး .. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ..စဉ်းစားရန် …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စီးပွါးရေး .. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ..စဉ်းစားရန် ….
စီးပွါးရေး .. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ..စဉ်းစားရန် ….
Posted by fatty on Dec 7, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 15 comments
ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူများ ဘာလုပ်စားကြမလဲ .. ဘာစီးပွါးရေးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ .. ရှိတဲ့ငွေလေး ဘယ်မှာ မြှုပ်နှံ ထားရရင်ကောင်းမလဲ .. ဘယ်မှာထည့်ထားရရင်
ကောင်းမလဲ …နဲ့ ဦးနှောက်စားနေရသောကာလဖြစ်ပါသည် ..။
ဒါက စီးပွါးရေးလုပ်မဲ့သူတွေအတွက် … ။ တနေ့လုပ်စာတနေ့စားရသူများအတွက်က .. လုပ်ငန်းတော့ပါးလာသည် ၀င်ငွေတော့ရနေသေးသည်။
နိုင်ငံတော်ကြီးနှင့်ချီပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံစီးပွါးရေးအတွက် မဟာစီးပွါးရေး ဗျူဟာကြီးများ ချမှတ်နေရသူများအတွက်ကား … ဆိုဘွယ်မရှိ ..။
မည်မျှ ခက်ခဲလိုက်မည်နည်း …။ နိုင်ငံတော်အတွက် မည်သည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမျိုး လုပ်ကြမည်နည်း …။
စက်မှုဇုံများဖေါ်ထုတ်ကြ၏။ စက်ရုံကြီးများမှာ ဧကပေါင်းများစွာ ကျယ်ဝန်းလှပေ၏။ ထုတ်လုတ်သည့်ပစ္စည်းမှာ မဘုတ်ဆုံတံဆိပ် ငြုပ်သီးမှုန့်၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်၊
ဂျုံမှုန့်စက်ရုံ၊ စက်ရုံသာရှိသည် ကြက်ကျော်ရောင်းရန်ဂျုံမှုံ့ကို ယိုးဒယားမှ တင်သွင်းနေရသည်။
ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် သိပ်အားထားချင်သေးပုံမရ ..။ ပဲကြီးဟင်းစားပြီး မော်တော်ကားများထုတ်လုပ်နေ၏။
အင်ဂျင်အစ မူလီအဆုံး နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းပြီး တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းနေကြသည်။
နိုင်ငံခြားမှ ပူးပေါင်းလုပ်လိုသူများ ရောက်လာလျှင် ရိုက်စားလုပ်ရန် စောင်းစားလျှက်သာရှိကုန်၏။
ရိုက်စားနည်းမှာကလည်း … သူ့ဘက်က နည်းပညာ စက်ပစ္စည်း တန်ဖိုးညှိကြရာဝယ် .. ဒီဘက်ကပြစရာ မည်မည်ရရ မရှိတော့
မြေတန်ဖိုးကိုိမြှင့်တင်ပြီး သူ့တန်ဖိုးနည်းပါးရအောင် ဆွဲယူကြရသည်။ ပြီးတော့ .. 40% .. 60% ရှယ်ယာခွဲမှု လိုမျိုး လုပ်ကြပြန်သည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို အမှန်တကယ်အားပေးပါက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဘယ်လောက်ပွင့် လိုက်မလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံအား ပါတ်ကြည့်ပါက အရှေ့ရိုးမ အနောက်ရိုးမ ကချင်ပြည်နယ် … ရှိရှိသမျှ တောင်ကတုံးများသာတွေ့ရတော့သည်။
သစ်တွေကုန်ပြီ။ အချောထည်များသာ တင်ပို့ရန် အလွန်ကောင်းသော ဥပဒေ ထွက်လာဘူးပါသည်။ သို့သော် မိမိအားထောက်ခံသူများအား
ချီးမြှောက်ရန် သစ်အလုံးလိုက် တင်ပို့မှု အထူးပါမစ် လုပ်ပေးရာက .. ထောက်ခံသူ စီးပွါးရေးသမားများ ကပ်ရပ်စားသူများလာတော့
မြန်မာပြည်တွင်း လှပစွာစီးဆင်းနေသော မြစ်ကြီးဧရာဝတီ ပေါ်တွင် တံတားများစွာ ဆောက်ကြပြန်တော့ အင်ဂျင်နီယာများ ၀မ်းသာကြကုန်၏။
တံတားချဉ်းကပ်လမ်း ဖေါက်လုပ်ဆဲ … ရန်ကုန်မှာတိုက် ၃ လုံးလောက်က အရင်ပြီး၏။
ဧရာဝတီလဲ မခံနိုင် သောင်တွေထွန်းကုန်ပြီ .. လင်းပိုင်တို့ အသက်ရှုကျပ်ကုန်ကြလေပြီ။
ဒီကြားထဲ ဧရာဝတီ ဇက်ခွပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ဆောက်ရန်က ပေါက်ဖေါ်ကြီးတို့၏ အကျိုးသယ်ပိုးရပြန်၏။
သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့တွေ အလကားတွေ့တာဘဲ အရင်းအနှီး စိုက်ရတာမှတ်လို့ .. ယိုးဒယားနှင့် တရုပ်ကို အလွယ်တကူထုတ်ရောင်း
သူတို့ဆီကဘာတွေပြန်ဝင်တုန်း ကြည့်လိုက်တော့ …. တရုပ်စက် .. တရက်နှင့်စုတ်သည်များသာ ..။
မဟာရင်းနှီးမှုများတွင် အမှန်စဉ်းစားသင့်သည်က …အီဂျစ်တို့၏ ပိရမစ်များ ..၊ အင်ဒိုနီးရှား၏ ဘောရောဗုဒ္ဓဘုရား ..၊
ကန်ဗောဒီးယား၏ အန်ကောဝပ် …တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
မြောက်ဦးက ရှေးဟောင်းနယ်မြေဖျက်စီးပြီး မီးရထားလမ်း ဖောက်မည်တဲ့ … ငါတို့မြန်မာတွေ၏ အသိဥာဏ်သည် … ဒီမျှမတုန်းတန်ရာ ..။
ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်လာမှု့ကြီးထွားလာခြင်းသည် အမှန်တယ်လိုအပ်ပါသော်လည်း ထိုအပေါ်၌ ကြည်နူးပျော်မွေ့ခြင်းသည်
ထာဝရမဟုတ်။ ကြာလာလျှင်ရိုးအီလာအုံးမှာပင် ..။ ဘာသာရေး အတွေးအခေါ် ခ့စားမှု အာရုံ … စသည့်အချက်များအပေါ်
ဘီလ်ဂိတ် ဘယ်လိုချမ်းသာလာသလဲ … မြေမရှိ ရွှေမရှိ ရေနံတွင်းမရှိ အဆောက်အဦတွေမရှိခဲ့ပါ။ သူရှိတာက အသိဥာဏ်သာဖြစ်၏။
ယခင်က အသိဥာဏ်ကြောင့် ထူးထူးခြားခြားကြွယ်ဝသူ သမိုင်းတွင်မရှိခဲ့ပါ ..။ ယခုအခါ အသိဥာဏ်ပညာဖြင့် ဘီလျံနာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။
ခွန်အားဖြင့်ကြီးပွါးရန်မရနိုင်သဖြင့် အသိဥာဏ်ပညာရှာပြီး ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်ပူးပေါင်းပါက အောင်မြင်ဖွယ်ဖြစ်ပါမည့်အကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ဘယ်မှာရင်းနှီးကြမလဲ …. အသိဥာဏ်နှင့်ယှဉ်ပြီးစဉ်းစားနိုင်ကြပါစေ ….။
ကြိုက်တယ် ဦးဖက်တီး ရေ
ဒါမျိုး စာတွေ များ များ ထွက်လာ တာ ကောင်း တယ်
ရင်းနှီးမှရတယ်ဆိ်ုတာ ဟိုးရှေးခေတ်ကပါ ကိုဖက်
ဆိုပြီး တပုဒ်လောက်တော့ ရေးလိုက်ပါအုံးမယ်၊
မြန်မာတွေ နှစ်လုံးထီနဲ့သာ အချိန်ကုန်နေပါတယ်။ နှစ်လုံးကိစ္စကတော့ ကျွန်တော်၊ယနေ့ ဂေါပကရုံး တစ်ရုံးကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ လူကြီးငါးယောက်ရှိတာ ဒိုင်တစ်ဦးဝင်လာတယ်။ ငါးယောက်လုံးက နှစ်လုံးထီကို ၀ိုင်းထိုးနေကြတယ်ဗျာ…။
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အိုးအိမ်တွေကို ဖျက်ပြီး ပိုက်လိုင်းသွယ်
သူများနိုင်ငံကို ရောင်းတာ အမုန်းဆုံးဘဲ
နေရာထိုင်ခင်းတွေ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေ ….
ဒီကောင်တွေကို သီးခံဘို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး
ဒီနေ့ အချိန်ထိ တိုင်းပြည်တွက်ဆို ဘာတစ်ခုမှ မရှိတော့ဘူး
တရုတ် ကလဲအချဉ်မဟုတ်ဘူးလေ မြစ်ဆုံက ရွှေရတာကို ဒီကိုပိတ်လိုက်တော့ ရေထဲကနေ ဆယ်မှာပေါ့။ စီမံကိန်းက နဲနဲ သစ်ပင်ကများများ ခုတ်ရမှာပေါ့။ နောက်ဆို ဧရာဝတိ ဆိုတာ အသားထဲဖြစ်တော့မှာ လူမျိုးရေ ခွဲခြားခြင်း
မရှိဘူးဖြစ်တော့မှာပေါ့။ အခုတောင် ရေအတော် ခန်းနေပြီ။ ကိုယ်ကက ကုန်ကြမ်းကို ကိုယ်မှာပြန် ထုက်ပြီ ဒီကိုပြန်ရောင်းကြမှာပေါ့။ နဲနဲဆို တရုတ် တို့က ကာကွယ်နေတာ။
ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်စားလဲ ပေးရတာပဲ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ …………
မဟုတ်တာသာလုပ်စားတော့ ။ ပေးရတာ ချင်းတူတူ။ လိုင်းစင်ရှိလဲ ပေးရတာပဲ။ မထူးဘူး။
အသိဥာဏ်ကို ပညာကနေရမယ်။ ပညာသင်တဲ့လူငယ်တွေ နိုင်ငံခြားမှာ။ ပညာတတ်တဲ့ သူတွေ တိုင်းပြည်ပြန်မလာဘူး။ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲ။
ဘီလ်ဂိတ်ထက် ရှေ့ရောက်အောင် အေဂိတ်လို့ နာမည်မှည့်လိုက်မှာပေါ့။
မြန်မာ့နိုင်ငံခြား၇င်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေဆိုတာ(၁၉၉၀)၀န်းကျင်လောက်ကထွက်လာပါတယ်။ ၀င်လာတဲ့ direct investment ဆိုတာတွေဟာအမည်ခံပွဲစားတွေသာများပါတယ်။ မူ၇င်းစီးပွားေ၇းကုမ္ပဏီကြီးတွေကချက်ချင်းမ၀င်ပါဘူး (ဒီနေ့အထိဆိုပါတော့)။ ငွေကြေးစနစ်နဲ့နိုင်ငံေ၇းစနစ်တည်ငြိမ်မှုမ၇ှိသေးသေ၇ွ်က၀င်လာသမျှတွေက ပွဲစားတွေဆိုတာအသေမှတ်ထားကြပါ….ေ၇ာင်း၇င်းတို့။
မြန်မာနိုင်ငံ၇ဲ့ေ၇မြေသဘာဝနဲ့အကြောင်း၇င်းခံတွေကသိပ်ကောင်းတာအမှန်ပါ။ အနောက်နဲ့အာ၇ှကျားတွေကသိပ်မျက်စိကျကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့စနစ်နဲ့အစိုး၇ကိုမယုံပါဘူး…။
ဥပမာတခု (တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ) ပြောပြပါမယ်။ စင်္ကာပူကိုအခြေခံတဲ့အမေ၇ိကန်ပွဲစားကုမ္ပဏီတခုကအဲ့ဒီအချိန်လောက်က mobile timber machine ကို အခြေခံတဲ့စီးပွားေ၇းလုပ်ငန်းသွင်းလာပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့စနစ်ပါ၊ သစ်တောနဘေးမှာတင်သစ်လုံးကနေပ၇ိဘောကပစ္စည်းအဆင့်ကိုတိုက်၇ိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့အပြင်နေ၇ာေ၇ွှ့ပြောင်းလို့၇တဲ့အတွက်စ၇ိတ်နဲဝန်ကျင်းတဲ့ technology ကိုသုံးပါတယ်။ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုတောင်ငူသစ်တောဒေသမှာ အထက်မှာဖေါ်ပြတဲ့ဥပဒေအ၇ နှစ်(၃၀)အစိုး၇ကပြည်သူပိုင်မသိမ်းပါဘူးဆိုတဲ့(သူတို့ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့) အစိုး၇ကခွင့်ပြုလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံကို အဲ့ဒီစီးပွားေ၇းလုပ်ငန်းက၇တဲ့အကျိုးအမ်ြတ်က၇တ(ဲ့၆၀%)သောခံစားခွင့်ကိုခွဲဝေပေးတဲ့အပြင်နည်းပညာနဲ့သင်တန်းကိုလွဲပြောင်းပေးဘို့သဘောတူချက်မှာပါပါတယ်။ လက်၇ှိဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုတိုင်းခန်းလှည့်လည်ချိန်ေ၇ာက်တော့ “ဒီလောက်ကောင်းတဲ့နည်းပညာတိုင်း၇င်းသားတွေလက်ထဲမှာထား၇င်မကောင်းဘူးလား”ဆိုတဲ့မှတ်ချက်တခုတည်းနဲ့နေ့ချင်းညချင်း (ဥပဒေမှာပါတာတောင်ဂ၇ုမစိုက်တော့ဘဲ) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနဲ့အလွမ်းသင့်တဲ့သူလက်ထဲကိုဝကွက်အပ်လိုက်၇ပါတယ်။ အဲ့ဒါဥပမာများစွာထဲကတခုပါ။ အဲ့ဒိလုပ်ငန်း၇ှင်နိုင်ငံခြားသား(စင်္ကာပူက)က၇န်ကုန်မှာေ၇ာက်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်က စင်္ကာပူကဒုဝန်ကြီးချုပ် (လက်၇ှိဝန်ကြီးချုပ်) လီဆင်လျောင်းကိုတင်ပြတော့ဒီကိစ္စတွေကြားပြီးတဲ့လီကဒီလိုမှတ်ချက်ပြုအဖြေပေးလိုက်ပါတယ်…
“Don’t swim in the shallow water”..တဲ့။ ဘာမှအကျိုးမ၇ျိတဲ့နေ၇ာမှာအချိန်သိပ်အကုန်ခံမနေနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား၇င်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟောတခုဟောတခုနဲ့ထွက်သွားလိုက်ကြတာ…..။
I Support Ma Ma
ဦးဖက်ရယ် ဒါတွေကို တပ်ရှုပ်ကြီးကသိလို့ ရေရှည်စားဖို့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဘော်လုံးကလပ်ကို ဒေါ်လာ၁ဘီလျံ ပေးဝယ်ဖို့ လုပ်တာပေါ့ဗျာ။
ပြည်တွင်းမှာ လိုနေတဲ့ စွမ်းအင် အရင်ဖြည့်ပြီး ပိုလျှံမှ ရောင်းသင့်တာပါ။
ပြည်တွင်းစွမ်းအင် ဖူလုံလို့ တိုင်းပြည်တိုးတက်လာမယ့် အရာက ရောင်းစားလို့ရတဲ့ ငွေထက် ၁၀ ဆ မကပါဘူး။
ကုန်ကြမ်းမှ ကုန်ချောတွေ အများကြီးဖြစ်သွားမယ်။
အစွန်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုထိ ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်။